AKW NetworkKWỌ Network na Viralstyle: Onye Nlekọta Ndị Nlekọta na chazụ ahịa | Martech Zone
Ọrụ Network kwa afọ na-arụ ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde 100 ndebanye aha na ihe karịrị $ 3B na ịkwụ ụgwọ maka ndị na-ahazi 47,000 na ihe omume 200,000 na ihe omume.
Arụ ọrụ Network® bụ ndị na-eduga n'ọma ahịa zuru ụwa ọnụ maka ihe omume na ihe omume, na-ejikọ ndị sonyere na ndị na-ahazi ọrụ, ebe ha na-enye ọgụgụ isi azụmaahịa na-enweghị atụ site na usoro ọrụ data anyị na-eduga na nghọta nghọta nke na-enyere ndị na-ahazi aka ịchụpụ ntinye na ntinye ego.
Usoro ha dịgasị iche iche nwere ọtụtụ nyiwe na ọrụ:
Ọrụ Ọrụ - igwe-oji igwe enwere ike ichota. O doro anya, kwụsie ike, ma na-agbanwe agbanwe, Ọrụ na-arụ ọrụ na-enye ọrụ na akụrụngwa iji kwado ndị otu ọ bụla.
Arụ Ọrụ Cloud - na-enye nghọta n'ime ihe ọmụma ọgụgụ isi nke ihe omume ha. A omenala-ewere ngwọta na-enye gị ohere ịnapụta actionable nkwurịta okwu gị ahịa mgbe nsuso ha engagging, enyere a miri nghọta nke ebe, mgbe na otú ha chọrọ ịnụ gị.
ỌRIVE EGO - A omenala-ika ngwọta na-enye gị ohere ịnapụta actionable nkwurịta okwu ka ndị ahịa gị mgbe nsuso ha engagging, na-enyere a miri nghọta nke ebe, mgbe na otú ha chọrọ ịnụ gị.
Mobile Apps - A usoro nke mobile ọrụ ngwọta ezubere iji na-ekere òkè ọgwụgwụ ọrụ na-ekere òkè na ihe omume.
Sistemụ Oge Ọsọ - Ihe ngwọta oge oge RFID maka agbụrụ nke nha niile (TUHF)
Ọrụ Ngwọta Network Na-agụnye
Sọftụwia Njikwa Ọsọ - ịdenye aha ịntanetị na ngwọta ahịa iji nyere aka mee ka ndị ọzọ sonyere, jikwaa ihe omume dị mfe, ma wuo ụdị ike.
Ntụrụndụ Management Software - Net Net na-enyere ngalaba na ogige ntụrụndụ aka, YMCA, ogige ụlọ ọrụ na ebe ndị ọzọ na-eme ka ọrụ na-abawanye nsonye site na ijikwa ndebanye aha, ndozi, usoro, ụlọ ọrụ, nyocha saịtị, ndị otu na ndị ọzọ.
Ngwanrọ Njikwa Software - Arụ Ọrụ na-anapụta na nrube isi na nchebe maka ogige, marinas, saịtị akụkọ ihe mere eme, ihe eji eme ụbọchị na ikikere oge dịka ịchụ nta, ịkụ azụ na ụgbọ mmiri.
Ogige Njikwa Software - Onye na-elekọta ogige na-eme ka ogige ndị na-agba ọsọ nke ọma, gụnyere ụlọ egwuregwu egwuregwu, klasị nka, mmemme agụmakwụkwọ na ụdị ogige niile, ụbọchị ma ọ bụ n’abalị. Mee ngwa ndebanye ndebanye na ntanetị ọsọ ọsọ, tinye nhazi ịkwụ ụgwọ echekwara, ịgba ụgwọ ịgba ụgwọ ezinụlọ yana nyochaa ngwa ọrụ ịkọwapụta dashboard.
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu - Na-agba ọsọ otu egwuregwu site na otu ntanetị - gụnyere ọgbakọ, mkpakọrịta, klọb na otu gọọmentị mba na-eto eto na egwuregwu ndị okenye. Egwuregwu sọftụwia a na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ ngwa ngwa ma jikwaa ndebanye aha ndị ọkpụkpọ, ịkwụ ụgwọ, ndebanye aha, ọrụ afọ ofufo, usoro egwuregwu, ịkọ akụkọ, na ozi nkwukọrịta email
Resort na ebe nkiri Management Software - Ejikọtara na ntanetị na ntanetị maka ebe ugwu na ebe ntụrụndụ, ụlọ ihe ngosi nka, ọdọ mmiri, na ogige ntụrụndụ. Na-arụ ọrụ nke ọma karịa ire ere, njikwa mkpụrụ, ndị otu, yana ngwa nri na ihe ọ beụverageụ.
Ogige na Onye Nlekọta Klas bụ maka ndị nkuzi na ndị nchịkwa chọrọ ndebanye aha na ịkwụ ụgwọ klaasị n'ịntanetị, nkwukọrịta na ịkọ akụkọ data, yana nkwado njikwa klaasị. Jiri usoro ịkwụ ụgwọ na njikwa maka ịntanetị maka ụlọ akwụkwọ.
Ngwakọta Ngwakọta Viralstyle
Ọrụ Network ka ike ya online ndebanye usoro na Viralstyle, iji nyere ihe omume aka ịmeba ngwa ahịa ngwa ahịa. AKW tracksKWỌ na-egwu ahịa na-ere ahịa ma na-ewepụta nghọta data iji nyere ndị na-ahazi aka ịchọpụta ego ha na-abawanye n'ihi ahịa ahịa, nke ga-enyere ndị na-ahazi aka ịme mkpebi maka ihe ga-eme n'ọdịnihu.
Ndị na-ahazi mmemme nke na-eji njirimara azụmaahịa ahụ nwere ike ịhọrọ ihe karịrị nhọrọ 20 maka uwe na ngwa. Njikọ ahụ na-enye ndị ahịa ohere ibugo ụdị ahaziri, akara ngosi, ederede, na ụcha agba iji nyere ndị sonyere aka ịzụta ihe ahaziri iche.
Dịka akụkụ nke ntinye aka nke ọrụ iji wepụta usoro nchịkwa ndụ ndụ zuru oke, anyị webatara atụmatụ azụmaahịa a ka ndị nhazi nwee ike itinyekwu oge na-enye ndị so na ha ahụmịhe kachasị elu na obere oge na ngwa ahịa na ngwa ahịa mmejupụta. Sam Renouf, onye isi njikwa maka egwuregwu na Network Network
Ngosipụta: Ndị Sonyere Njikwa, Ọrụ Ọrụ bụ ụghalaahia edenyere nke Network Network.
Tags: n'ọrụ mobile ngwa ọdịnalanọ n'ọrụ netwọkọrụ ojiiogige njikwa softwareonye na-elekọta ogigengwọta klasonye njikwa klaasịnjikwa ụlọ akwụkwọdata omumendebanye aha mmemmemmezumerchngwá ahịamobile ngwa ọdịnalaịkwụ ụgwọ n'ịntanetịndebanye aha ụlọ akwụkwọ n'ịntanetịnjikwa n'èzíngwanrọ njikwa ngwanrọikere òkèNjikwa agbụrụngwanrọ njikwa njikwangwọta ọduọnlekọta ntụrụndụntụrụndụ softwareeme njikwa softwareRFIDnjikwa egwuregwungwanrọ njikwa egwuregwuTUHFnje virus